दसैँ र बलि प्रथा – Chitwan Post
लीला दाहाल (अधिकारी)
बडादसैँ सम्पूर्ण नेपालीको अत्यन्तै विशिष्ट पर्व हो । हिन्दुधर्मले विविध सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यताको चाडपर्व मनाउँदै आएको छ । तिनै चाडपर्वहरुमध्येको असत्यमाथि सत्यको विजय भएको उपलक्ष्यमा मनाइने बडादसैँ पर्व अहिले पनि हाम्रोसामु आएको छ । आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि पूर्णिमा तिथिसम्म १५ दिनसम्म मनाइने यस पर्वभित्र हाम्रा विविध सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक पक्ष समाहित छन् । खासगरी, नारी महाशक्तिका रुपमा प्रख्यात देवी स्वरुपाहरुको विशेष पूजाअर्चनासहित मनाइने यस पर्वलाई शक्ति आराधनाको विशेष प्रवाहका रुपमा लिइन्छ । भगवती दुर्गाका विविध स्वरुपअन्तर्गत पर्ने शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता कात्यायिनी, कालरात्रि, महागौरी र सिद्धिदात्री गरी जम्मा नौवटी शक्तिस्वरुपिणी देवीहरुको विशेष व्रत, पूजा र उत्सव आदि गरी यो पर्व मनाइने गरिन्छ । यसरी आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमीसम्म जम्मा नौ दिन भगवती दुर्गाका विविध स्वरुपहरुको आराधना गर्दै मनाइने यो पर्वलाई नवरात्रि पनि भनिन्छ । माथि वर्णित सबै देवी स्वरुपाहरु देवी पार्वतीसँग सम्बन्धित छन् । पार्वतीलाई शिवशक्तिका रुपमा लिइन्छ । शिवशक्ति भनेको कल्याणदायिनी शक्ति हो । आफ्नो वा आफूले प्राप्त गरेको शक्ति लोककल्याणको दिशामा परिचालित गर्न सकेमा नै स्वशक्तिको सही सदुपयोग हुनका साथै आफ्नो समेत कल्याण हुन्छ । यसविपरीत अकल्याणकारी मार्गमा ल्याएमा त्यस्तो शक्ति क्रमशः निस्तेज हुँदै स्वयं आफूलाई नै निस्तेज तुल्याउँछ ।
हामी शक्तिको मातले उन्मत्त हुन पुगेको अहंकारी व्यक्तिलाई असुर भन्छौँ । सुर शब्दले देवतालाई बुझाउँछ । शक्ति र बुद्धिको सही प्रयोग सुरमा रहेको मानवले नै गर्न सक्छ । यसरी मानवले आफ्नो कर्मका माध्यमबाट नै आफूलाई सुर वा असुरका रुपमा समाजमा परिभाषित गर्दछ ।
यही दसैँ मनाउने निहुँमा हामीले कयौँ निर्दोष पशुपक्षीको हत्या गर्दछौँ । के यो बलि दिने प्रथा ठीक हो त ? “अहिंसा परमोधर्म” भन्ने मूल मन्त्रको रुपमा हिन्दुधर्म रहिआएको छ । यहाँ हिंसा गर्नुलाई धर्म मान्न सकिँदैन । धर्म शब्द कुनै हिंसाको पर्याय होइन । मन, बचन र कर्मले कसैको हिंसा, हत्या नगर्नु, प्राणीमात्रमा सद्भाव राख्नु, अर्काको कुभलो नचिताउनु नै धार्मिक प्रवृत्तिका लक्षण हुन् ।
देवीलाई हामीले सृष्टिकर्ता र पालनकर्ता मान्छौँ । देवीलाई सबै प्राणीका माता मान्छौँ । यो संसारका सबै प्राणी देवीका सन्तान हौँ भने आफ्नै देवीमाताले आफ्नै सन्तानको रगत पिउन सक्छिन् ? आफ्नै अगाडि ती अबोध र निर्दोष सन्तानको आफ्नै पूजा गर्नाका लागि बलि चढाउँदा देवीमाता खुसी होलिन् ? जसरी हामीले संस्कार भए पनि नराम्रा कुरीतिहरुलाई निर्मूलीकरण गर्दै जाँदा सती प्रथा हट्यो त्यसरी नै बलि प्रथा पनि हट्न जरूरी छ । आफ्नै निजी इच्छा पूरा गर्नका लागि अन्य कुनै पनि कुराको अनैतिक प्रयोगलाई धर्मले निषेध गर्छ । जुन प्राणीको आत्मा हामीले मुक्त गर्न सक्दैनौँ, त्यो प्राणीको बलि बलि नभएर हत्या हो । वेदशास्त्रमा र धर्मशास्त्रमा पनि काटमारलाई मनाही गरिएको छ । प्राणीलाई हिंसा नगरीकन मासु प्राप्त हुँदैन । त्यसैले, कुनै पनि पशुपक्षी मारेर मनुष्यको अन्तरमन सुखी हुन सक्दैन ।
बलि दिएर पुण्य हुन्छ र मनोकामना सिद्ध हुन्छ भन्ने जुन नकारात्मक मानसिकता बसेको छ त्यो हिंस्रक प्रकृति भएका मानिसहरुको मनोरोगको उपज हो । ती अबोध र निर्दोष पशुको हत्या गरेर बलि दिने होइन आफूभित्र रहेको अहंकार, रिस, रागलाई बलि चढाउनु नै वास्तविक बलि हो । देवीदेवता सदासर्वदा सम्पूर्ण प्राणीहरुको कल्याण चाहन्छन् । त्यसैले, अब हरेक नागरिकले हिंसाको संस्कृतिलाई सदाका लागि बन्द गर्न हातेमालो गर्दै हिंसा अन्त्य अभियान सुरू गर्न जरूरी छ ।